Ugcino kunye noKwabiwa
Yeyiphi imilinganiselo yamabhanti e-mesh ebhetyebhetye?
Ibhanti ye-flexible chain mesh ihlanganiswe kunye neeplati zekhonkco ezenziwe ngeeplastiki zobunjineli, kwaye iibhanti ze-mesh zemodyuli zidibeneyo ngokudibanisa okanye iindlela zokubeka izitena. Kwaye ihlanganiswe ngezikhonkwane ezipheleleyo, esi sicwangciso siphucula ngokusisiseko amandla ebhanti yokuhambisa. I b...
ILETA EYA KUBANTU BETHU
M'SIA-PACK & FOODPRO – 16-19 Juni
ngu admin ngo 20-01-08
Umhla: 16-19 kaJulayi, 2020 Ima: I-G27 yaseMalaysia inenkampani engaphezulu kwe-2,000 esekiweyo ebandakanyeka kushishino lokulungisa ukutya kwaye uninzi lwayo ngamaShishini amaNcinci namaPhakathi (ii-SME) apho ithatha i-10% yemveliso iyonke yemveliso a.. .
Foodpro Bangladesh - 26-28 Novemba
Umhla: 26-28 Novemba, 2020 Stand: PAV506B FoodPro ikuzisa ubuso ngobuso kunye nabenzi bezigqibo abaphezulu abavela kwezinye zezona nkampani ziphumeleleyo zokutya neziselo kwihlabathi kunye nabavelisi beZithako kunye noomatshini. Uya kudibana nabafowunelwa abatsha ...
IPPE – 28-30 JANUWARI
ngu admin on 19-12-17
Ndizakukubona kwi-IPPE nge-28-30 kaJanuwari, 2020 kwiZiko leNkongolo yeHlabathi laseGeorgia, eMelika. UMboniso weMveliso yeHlabathi nokuLungiswa kowona msitho mkhulu wehlabathi wonyaka wenkukhu, inyama kunye nokutya oluhlobo lwawo. Uluhlu olubanzi lwamazwe ngamazwe...
ngu admin on 19-12-14
Ndizakukubona kwiFoodPro nge-5-8 kaJulayi, 2020 eOstreliya. ukuma kwethu: XM-3. Rhoqo kwiminyaka emithathu, iingqondo ezinkulu kwihlabathi lokutya kunye neziselo zihlangana kwi-foodpro. Itekhnoloji kunye nezinto ezintsha ezibonwa apha zibumba ikamva lokulungisa ukutya kunye...
I-FoodTech PackTech - 22-24 SEPTEMBA
Ndizakukubona kwiFoodTech PackTech nge-22-24 kaSeptemba, 2020 eNew Zealand. Isikhundla sethu esingu-3118. Sisebenza ngamandla ngaphezu kweminyaka engama-20, (FTPT) yeyona ndawo inkulu yaseNew Zealand eyenza ukutya, ukupakishwa kunye nomboniso worhwebo wobugcisa. Co-loca...
I-128th Canton Fair - 15-19 OKTOBHA
Ndizakukubona kuMbono we-128 weCanton nge-15-19 ka-Okthobha, ngo-2020 eGuangzhou, eChina. I-China Export and Export Fair, eyaziwa ngokuba yiCanton Fair, isekwe kwi-1957. Ibanjwe nguMphathiswa wezoRhwebo we-PRC kunye noRhulumente waBantu baseGuangd ...